Hogaanka dalka oo ka arrin sanaya magacaabista Golaha Wasiirada cusub – Bandhiga
Hogaanka dalka oo ka arrin sanaya magacaabista Golaha Wasiirada cusub
Wararka ka imaanaya Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia ayaa sheegaya in kullumo wadatashi oo u dhaxeeya Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi farmaajo, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabadiraxmaan iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamad Xuseen Rooble uu halkaasi ka socdo.
Waraka laga helaayo Kulamadaas ayaa waxaay sheegayaan in kulamada looga hadlayay magacaabista Xubnaha Golaha Wasiirada Soomaaliya maadaama Xukuumadda Cusub ee la soo dhisi doono ay heysato waqti yar oo laga doonayo inay wax badan ku qabato.
Kulamada wadatashiga ah ee la xiriira soo magacaabista Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa waxay ahaayeen toddobaadkaan kuwa si isdaba-jooga ah uga dhacayay Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in Ra’iisul Wasaare Rooble uu saacadaha soo socda ku dhawaaqo Golihiisa Wasiirada Cusub ee laga sugayo inay dalka doorasho xor iyo Xalaal ah ku hogaamiyaan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilligii ay codka kalsoonida siinayeen Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaa uu balan qaaday in ilaa iyo 8 qodob uu diirada saari doono, kuwaas oo Bulshada Soomaaliyeed u baahan yihiin in wax laga qabto.
Qodobadaas waxaa ugu weynaa arrimaha doorashooyinka,amaanka dalka,hormarinta dhaqaalaha dhab u heshiisiinta iyo qodobo kale oo dhamaantood dadka Soomaaliyeed muhiim u ah.